Kaadhimamtoota qopheessuu keessatti, kallattii xiyyeeffannoo
Heerri mootummaa biyya keenyaa, aangoon sagalee ummataatiin ykn filannoo bilisummaadhaan ummanni taasisuun qofa akka argamu ifoomseera, wabiis ta’eera. Kanaan ala, karaa kamiiniyyuu aangoo argachuunis ta’e aangoo mirkaneeffachuun akka hin-danda’amne heerri mootummaa keenya ifatti kaa’eera. Kunis, sinra demokraasii biyya keenya keessatti ijaaramaa jiruuf bu’uura guddaa kaa’eera.
Filannoon demokraatawaa ta’e, ummanni humna murteessaa akka ta’e mirkaneessee, yaaliin sagalee argachuuf taasifamu, faayidaa bu’uuraa ummataaf mirkaneessuudhaan akka milkoomu amana. Filannoon demokraatawaa, adeemsa kana keessatti, barbaachisummaa filannoo ummata hubachiiseefi amansiisee, paartii gaaffiilee isaatiif deebii kennuu danda’u akka adda baafatauufi cinaa hiriiruuf carraa kenna. Dabalataanis, filannoon paartiin biyya /naannoo/, aanaa/ magaalaa, akkasumas, ganda bulchuuf aangoo argatu, gaaffiilee ummataaf deebii kennuufi kennuu dhabuudhaan madaalamee filannoodhaan carraa aangoo akka argatu taasisa.
Bu’uuruma kanaan, dhaabni demokraatawaa ADWUI/ Dh.D.U.O. fi mootummaan misoomawaa keenya bu’aa ummataaf buuserraa ka’uudhaan dhaabbilee siyaasaa filatamuuf dhiyaatan hunda keessaa ummataan filatamee mootummaa hundeessuudhaan biyya gaggeessaa jira.
Wayita ammaa kanas, filannoo mana marii aanaa/ magaalaafi mana marii gandaa, akkasumas, itti guutiinsaa Caffeefi mana maree bakka bu’oota ummataa gaggeessuudhaaf karoorri qophaa’ee hojii keessa galameera. Filannoon
kun, sochii haaromsa biyya keenyaa mirkaneessuuf dhaabniifi mootummaan keenya taasisaa jiru keessatti gama siyaasaa, dinagdeefi hawaasummaatiin hiika attamii qabaa?
Filannoo nagaa, demokraatawaafi haqa-qabeessa ta’e gaggeessuu, adeemsaafi bu’aa isaatiif kan ummannii beekamtii kenneefi kan dhaabni keenya teessoo olaanaa argachuudhaan xumuramu akka ta’uuf xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Milkaa’ina galmoota kanaatiif gaheen miseensa keenyaa maal ta’uu qabaa? Gahee keenya kanas bahuudhaaf hangam hojjetaa jirraa?
Barreeffama keenya kanaan, dhimma yeroo kan ta’e kaadhimamtoota qopheessuurratti xiyyeeffanna. Dhimmi kaadhimamaa qopheessuu xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetamuu qaba jechuun maal jechuudha? Maaliif of-eeggannoo cimaadhaan hojjetamuu qaba jedhamaa? Waggoottan shanan dhufaniif, sochii misoomaafi bulchiinsa gaarii sadarkaa filannaan itti gaggeeffamutti qaama raawwachiistuufi seera baastuu ta’anii qaamoolee gaggeessan filachiisuu fi filachuu waan ta’eef dhimma xiyyeeffannoo barbaaduudha.
Ulaagaan ittiin miseensi kaadhimamu /filatamu/ mul’ata dhaabni keenya qabatee socho’aa jiruudha. Innis, sochii dhaabniifi mootummaan keenya nageenya, demokraasiifi misooma ariifataa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamuufi hirmaataa taasisu mirkaneessuuf godhudha. Kanaaf, miseensi kaadhimamu /filatamu/ gahumsaa
fi kutannoo mul’ata dhaaba keenyaa milkeessuu qabaachuu qaba.
Dhimmi qophii kaadhimamtootaarratti xiyyeeffannoo barbaadu inni biroo, hirmaannaa qaamoolee hawaasa adda addaa mirkaneessuudha. Mana marii sadarkaa gandaarraa eegalee mana maree bakka bu’oota ummataatti jiran keessatti hirmaannaafi fayyadamummaa siyaas-dinagdee dargaggootaafi dubartootaa, namoota baratanii, qonnaan /horsiisee bulaa, jiraattota magaalaafi qaama miidhamtootaa gahee sadarkaa sadarkaan isaaniif taa’een mirkanaa’uu qaba. Manneetiin marii hundi hirmaannaa qaamoolee hawaasaa naannawaa isaa jiru bakka bu’uu akka danda’utti kan hojjetamu yommuu ta’u, dhimmi hojii qabatamaa keessatti adda duree ta’uu garuu dagatamuu
hin-qabu. Kana jechuun maal jechuudhaa? Irratti mariyadhaa!
Hirmaannaa qaamoolee hawaasa adda addaa gahee sadarkaa sadarkaan isaaniif taa’een mirkaneessuu qabna jechuun garuu, kootaaf jecha, namoota ilaalchaafi gochaadhaan adda duree hin-taane kaadhimamaaf qopheessina jechuu miti.
Miseensi kaadhimamu /filatamu/ kan hojiilee misoomaafi bulchiinsa gaariitiin adda duree ta’e, hawaasa naannawaa
isaa jiraatu kakaasuufi qindeessuudhaan rakkoolee bulchiinsa gaarii fi nageenya naannawaa isaa kan hiiku, akkasumas, ummata biratti fudhatamaafi jaalala qabu ta’uun irra jira. Dabalataanis, miseensa sadarkaa adda addaarratti
gaggeessummaa kennuu danda’u ta’uun isaa murteessaadha.
Daraggootaafi dubartoota ilaalchisees, tattaaffii mataa isaaniitiin jijjiiramuuf kutannoo kan qaban, bu’aa qabatamaa
galmeessisaniin kanneen biroof fakkeenyummaan kan fudhataman irratti xiyyeeffatamuu qaba.
Walumaa galatti, kaadhimamtoonni fo’ataman hojii qabatamaa keessatti adda duree, rakkoolee kiraa sassaabdummaafi
bulchiinsa gaarii maqsuuf kan qabsaa’an, qabsaa’uuf kutannoo kan qabaniifi amalaafi naamuusa gaarii qabaachuu qabu. Bu’uura kanaan kaadhimamtoota qopheessaa jirraa